Raha araka ny fanazavan’ny Neny Rasoa dia efa antso manokana ho azy mihitsy ny familiana fiara karetsaka izay asan-dehilahy amin’ny ankapobeny. Vao 11 taona monja mantsy izy dia efa nampianarin-dRainy namily fiarakodia, ity farany izay mpamily ihany koa. Taorian’ny nahavitany ny fianarany ny taranja Malagasy teny amin’ny anjerimanontolo anefa dia nampianatra ny taranja Malagasy sy Frantsay ary Anglisy i Neny Rasoa saingy tsy tena nety taminy izany. Teo amin’ny faha-38 taonany izy vao nanomboka nanao io asany io, izany hoe : efa niteraka ny zanany lahimatoa, ary mbola hiainany sy tohizany mandraka androany.
Sady mikaraka tokantrano
Na izany aza nefa dia tsy manana mpanampy i Neny Rasoa ao an-trano. Izy avokoa no miantsoroka ny asa fikarakara ny tokantranony araka izany manomboka amin’ny fandrahoana ny sakafon’ireo vady aman-janany amin’ny atoandro ka hatramin’ny sasa lamba sy ny fambolena voninkazo. Amin’ny 04 ora maraina izy no mifoha isan’andro raha amin’ny 09 ora maraina no tsy maintsy mivoaka ny trano mandeha miasa. Amin’ny 05 ora hariva izy no tsy maintsy mamonjy fodiana miatrika ny fikarakarana maro samihafa ao an-trano indray.
Anisan’ireo vehivavy miavaka i Neny Rasoa amin’ny fiatrehana ny asany. Tsy maintsy manao costume na akanjo lava misy kisarisary voninkazo mantsy izy rehefa miasa ho mariky ny fanajany ireo mpandeha aminy. Ankoatra izay dia tsy maintsy manao manimanitra ihany koa i Neny Rasoa vao mivoaka ny trano, ankoatra ny lokomena midorehitra amin’ny molony. Farany izay tsy kely akory dia vehivavy manana fandavan-tena izy amin’ny fitadiavana client. Tena mitalaho mihitsy mantsy izy raha araka ny fitantarany ka anisan’ireny ny fanontaniana ireo olona eny amin’ny arabe…
Na izany aza dia anisan’ireo vehivavy mbola mihetsiketsika i Neny Rasoa. Tia mikoloko vatana amin’ny alalan’ny fanatanjahantena ihany koa izy. Ho an’ny fikarakarana hoho manokana ohatra dia tsy maintsy manao izany isan-kerinandro izy raha araka ny fitantarany. Toraka izany koa ny fanamboarana ny tarehy amin’ny alalan’ny fanaovana “gommage” sy ny “masque”. In-dray mandeha isan-kerinandro ihany koa no hanaovany izany. Tsy mampiasa ireo karazana akora hita eny rehetra eny anefa i Neny Rasoa fa ireo mba manana ny maha izy azy. Tsy latsa-danja amin’ireo ny fanatanjahantena. Raha dihim-bazaha in-30 isa isan’andro mantsy no nitaizany vatana teo aloha dia efa navadiny ho fikosehan-trano isan’andro vao maraina izany izao miampy ireo karazana fihetsika manatsara bika sy vatana isa-maraina raha tsy dia reraka loatra izy. Manampy ireo ny fanaovana baskety any am-piangonana.
Nomarihin’i Neny Rasoa moa fa Kristiana izy. Amin’ny ankapobeny dia ny andro Sabotsy sy Alahady no hatokany amin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra raha efa haompany amin’ny asa fitadiavana sy ny fikarakarana ny ankohonany kosa ny dimy andro ambiny. Tsy mitsahatra ny mitory ny filazantsara amin’ireo mpandeha entiny izy araka izany isan’andro, indrindra fa ny haratsian’ny toaka sy ny sigara amin’ny fihinanan’ny olombelona azy.
Tsy mety intsony
Tsara ny manamarika fa tsy mety intsony ny asana fiara karetsaka amin’izao raha araka ny fanazavan’i Neny Rasoa. Zara raha mahita client miisa efatra mantsy ny mpamily iray ao anatin’ny andro iray raha mahay misarika sy misintona olona. Mikasika ny fahasimban’ny fiara tampoka eny am-pandehanana moa dia nambaran’i Neny Rasoa fa efa za-draharaha amin’izany izy. Voavahany avokoa izay olana ara-teknika mety miseho amin’ny ankapobeny ankoatra ireo goavam-be izay tsy maintsy hiantsoany olona.
Isaorana i Neny Rasoa nanaiky nitafatafa tamin’ny gazety Jejoo
Legende : Tahaka izao ny paozin’ny Neny Rasoa rehefa handeha hiasa ! (sary manao akanjo lava )
Neny Rasoa amin’izao fotoana mbola miasa hatrany !
Ity ny fiarany , ilay 2 CV kely nahafantarana azy hatramin’izay !